“Waxaan soo bandhignay ciyaar aad u wanaagsan, tani waxay ahayd dadaalkeena” – Messi – Gool FM
“Waxaan soo bandhignay ciyaar aad u wanaagsan, tani waxay ahayd dadaalkeena” – Messi
(Yurub) 17 Abriil 2019. Kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay qaab ciyaareedka cajiibka ah ay soo bandhigtay Blaugrana, kulankii ay xalay kula ciyaareen Manchester United garoonka Cump Nou.
Kooxda Barcelona ayaa cashar u dhigatay dhigeeda Manchester United kulanka lugta labaad ee wareega sideed dhamaadka tartanka Champions League kaddib markii ay kaga adkaatay 3-0, balse wadarta goolasha labada lugood ee ciyaartan ayaa ah 4-0.
Hadaba ciyaarta kaddib Kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa wuxuu ka hadlay dareenkiisa wuxuuna yiri:
“Aragtidan waxay ahayd mid cajiib ah, taasina waxay ka tarjumeysaa dadaalkii aan bixinay”.
“Marka laga reebo 5-ta daqiiqo ugu horeysay ciyaarta ee aan walwalsaneyn, kaddib waxaan xakameenay ciyaarta, waxaana soo bandhignay kubadda cagta ee cajiib ah”.
Intaas kaddib Messi ayaa la weydiiyay kooxda uu jeclaan lahaa aragtidiisa inay kula ciyaaraan wareega xiga afar dhamaadka ee tartanka Champions League wuxuuna yiri:
“Koox kasta way dhib badan tahay, sababtoo ah waa afar dhamaadka tartanka Champions League, waxaana gaara kooxaha u qalma, waana kuwa ugu fiican, waxayna noqon doontaa xaalad aad u adag”.
HORDHAC : Man City VS Tottenham? Maxaa laga filan karaa kooxda Man City kulanka caawa?
Ciyaaryahankii hore kooxda Chelsea Joe Cole oo ka hadlay mustaqbalka cakiran ee Eden Hazard